May 29, 2021 - Babal Khabar
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाइएको बताएका हुन् । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता ५ वर्षयता वृद्धि भएको थिएन । २०७२ माघपछि भत्ता नबढेकाले दुई सुरक्षा निकायले ५० प्रतिशत भत्ता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गृहसमक्ष राखेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतले बढेको भन्दै भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि सह–सचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा गठित समितिले हरेक दुई वर्षमा रासन भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कति थियो भत्ता ? केन्द्रीय प्रहरी प्
प्रत्यक नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार ऋण हेर्नुहोस कसरि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्साको वृद्धि पनि यसबीचमा उच्च दरमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३७.३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । ०७४ मा प्रत्येक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ । सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर, मुलुकलाई ऋणको भ
खुशीको खबर : लकडाउन अवधिभरको विद्युत महशुल तिर्नु नपर्ने
सरकारले निषेधाज्ञाभर २० यूनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुल शत प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री बिष्णु पौडेलले निषेधाज्ञाभर २० यूनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुल शत प्रतिशत छुट दिने बताएका हुन् । त्यस्तै २० हजार लिटरसम्म खानेपानी शुल्क निः शुल्क दिने घोषणा पनि पौडेलले गरेका छन् । त्यस्तै स्वयम् सेवीकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च शत् प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वयम् सेवीकाहरुलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । हाल ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।
खुसीको खबर बिद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा सुविधा
सरकारले वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरतलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्षका लागि ८० हजारसम्म कर्जा सुविधा दिइने घोषणा गरेका हुन् । १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निः शुल्क वितरण गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरे । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखे २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातक वा सो भन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवा प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा गरेका हुन् । युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाउने
गरिबलाई ‘राज्य सुविधा परिचय-पत्र’ प्रदान गरिने, हेर्नुहोस कसले पाउने ?
सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि 'राज्य सुविधा परिचय-पत्र' प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् । 'आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई 'राज्य सुविधा परिचय-पत्र' वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ,' मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय-पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बताए । 'सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय-पत्रसँग आबद्ध गरीनेछ,' उनले भने । त्यस्तै, सरकारले 'गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम'लाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई भने खारेज गरेको छ । 'गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवृति कोषलाई सहकारीको बिउँ पूँजीको रूप
वृद्ध भत्ता बढ्यो कति पुग्यो हेर्नुहोस
सरकारले वृद्धाभत्ता बढाएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्धाभत्ता चार हजार पुर्याएको घोषणा गरेका हुन् । सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार पुर्याएको हो । अब ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक रुपमा चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउनेछन् । यसअघि वृद्धभत्ता तीन हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको थियो ।
अब को १० वर्ष मा डिजेल पेट्रोल बाट चल्ने सबारी विस्थापित गरिने
सरकारले २०८८ सालसम्म डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाउने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विक्रम संवत २०८८ सालसम्म डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन र बिक्रीवितरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि रोक लगाउने बताएको छ । यस्तै, फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल लेन विकास गरिने उनले बताए ।
२०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति लिने बताए । त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्तार गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा छुट दिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै सडक दस्तुरमा पनि छुट हुने बजेटमा उल्लेख छ । यो पनि... विध म्यानेजमेन्टले कोरोना भाइरस महामारीमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको बेलामा ललितपुर महानगरपालिकालाई २०० थान अक्सिजन सहितको सिलिण्डर सहयोग गरेको छ । अत्यावश्यक अक्सिजन अभावका कारण कुनै कोरोना संक
सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘फलफूल, दूध र तरकारी, माछा–मासु किसानले नजिकको बजारमा ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । यस्तै साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यो पनि.. सरकारले अनुदानको रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रासायनिक मल खरिदका लागि नयाँ बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँले रकम वृद्धि भएको हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने,कस्ताले आउने हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं / अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने बताएका छन् । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध गराइने छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।